Aiza Ary Ahoana Ny Fandriakan’ny Rà Indizeny ao Brezila? · Global Voices teny Malagasy
Aiza Ary Ahoana Ny Fandriakan'ny Rà Indizeny ao Brezila?
Voadika ny 08 Novambra 2016 6:56 GMT
Vakio amin'ny teny Français, čeština , Español, Português
Nanao fihetsiketsehana ho fanoherana ny fananganana ozinina mpamelona angovon'aratra amin'ny alalan'ny rano ao Rio Tapajos, faritra amazôniana tao Brasilia ny Indiana Munduruku tamin'ny taona 2013. Saripika: Agência Brasil/CC-BY 3.0
[Amin'ny teny paortiogey avokoa ny rohy rehetra ankoatra izay lazaina manokana]
Nivoaka eto noho ny fifanarahana hifampizara votoaty ity lahatsoratra nivoaka voalohany tao amin'ny habaky ny Instituto Socioambiental ity.
Mitantara ireo herisetra mampihoron-koditra sy ireo fandaozana mahalasibatra iray vazimba teratanin'i Brezila ny tatitra navoakan'i Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil – Dados de 2015, notontosain'ny Vaomiera Misionera Indizeny (Cimi).
Navoakan'ny antontanisa fa famonoantena miisa 87 no voakaritra ho nataon'ny indizenan'ny firenena tamin'ny herintaona, ary ny atsasak'izany (45) dia nitranga tao amin'ny Fanjakan'i Mato Grosso do Sul. Tanelanelan'ny taona 2000 ka hatramin'ny taona 2015, tranga 752 no voaisa tao amin'io faritra io. Nomarihan'ny tatitra ihany koa ny famonoana vazimba teratany miisa 137 tamin'ny taona 2015, ary ny ampahaefatr'izany (36) dia tao Mato Grosso do Sul irery.
Kilonga anelanelan'ny 0 ka hatramin'ny 5 taona miisa 600 eo ho eo no matin'ny aretina azo sitranina tsara tahaka ny pnemonia, aretin-kibo sy fivontosan'ny lalankanina sy/na vavony tao anatin'izany vanim-potoana izany. 26 isaky ny arivo, na avy roa heny noho ny salanisan'ny firenena ny taham-pahafatesan'ny zaza isan-taona ao Mato Grosso do Sul.
Voatondro ao anatin'ny tatitra sy heverina ho antony voalohany amin'ny fanitsakitsahana ny zo fototry ny Indizeny ny tsy fihetsehan'ny manampahefana amin'ny fanavahana ny tanin'ny vazimba teratany sy amin'ny fanatontosana ny tolotra mifandraika amin'ny fahasalamana sy ny fanabeazana.
Manodidina ny 900 000 ny isan'ny olona mandrafitra ny vahoaka vazimba teratany ao Brezila, na 0,5%-n'ny mponina iray manontolo ao amin'ny firenena, araka ny lahatahirin'ny fanisam-bahoaka tamin'ny taona 2010. I Brezila noho izany no firenena ao Amerika Latina ahitana tahan'ny vazimba teratany kely indrindra. Ho setrin'izany kosa dia i Brezila no firenena ahitana karazam-poko vazimba teratany betsaka indrindra – 305 araka ny fanisam-bahoaka.
Ny tatitry ny Cimi no anisan'ny mandrafitra ireo loharanom-baovao vitsy dia vitsy miresaka ireo herisetra atao amin'ny vazimba teratany mahantran'i Brezila.
Mihevitra toy izao i Lúcia Helena Rangel, mpandrindran'ny fikarohana : « Miainga na avy amin'ny mpamboly, na boto, eny fa na dia ireo olom-pirenena rehetra mihevi-tena ho manan-jò hamono zazakely izao haavon'ny habibiana izao », raha niteny ilay famonoana an'i Vitor Kaingang [mg], izay vao roa taona monja ary maty teo an-trotroan'ny reniny tamin'ny desambra 2015 teny an-dalan'i Imbituba.
« Nivoaka avy amin'ny adin-tany sy ny famariparitana azy ny fahafatesana, herisetra ara-batana mitranga », hoy ny fanamafisan'ny mpitsara Luciano Maia, mpandrindra ny Lapa Fandrindrana sy Fanitsiana avy amin'ny Fampanoavana Federaly fahaenina tamin'ny famoahana ny tatitra. « Tsy afaka ny hikimpy maso isika fa sady olana izany no vahaolana; tsy maintsy atao ny mitolona ho fankatoavana ny zon'ny vazimba teratany hanajary ny taniny », hoy ny fehinteny navoakany.
Roa andro talohan'ny namoahana ny tatitra, nizaka ny fanafihana fahadimy tao anatin'ny taona indray ny vondrom-piarahamonina vazimba teratany Guarani Kaiowá ao Kurusu Ambá, ao Coronel Sapucaia. Nahenoana feom-basy tao an-tanàna (tsindrio eto raha te-hahalala bebe kokoa momba izany). Mamariparitra ny toe-draharaha iainan'ny vahoaka vazimba teratany ao Brezila i Elson Canteiro, avy amin'ny vahoaka Guarani Kaiowá. « Ankehitriny, miaina ao anatin'ny fotoana mampidi-doza indrindra ny olona satria monina ao anatin'ny tany naverina ho azy ireo ny olona. Miaritra herisetra henjana isan'andro ry zareo. »
Ho an'i Marta Azevedo, mpandrefy isam-bahoaka misahana manokana ny vahoaka vazimba teratany sady filoha teo aloha ny Orim-Pirenena Mpanasoa Ny Indiana (Funai), tsy hita ny finiavana ara-politikan'ny sampan-draharaha ofisialy amin'ny fanamafisana ireo rafitra ara-torohain'ireo vahoaka ireo. « Hafahafa ny tsy fananana lahatahirim-panjakana ofisialy isan-taona miresaka ny fahafatesan-jaza sy ireo nateraky ny herisetra ao amin'ny vahoaka teratany », hoy ny tsikera nataony nandritra ny antsafa niarahana tamin'ny ISA.
Famariparitana hanavahana ny tany, endrika herisetra hafa
Ny fizarana voalohany amin'ny tatitra dia miresaka ireo herisetra atao amin'ny vakoka teratany, amin'ny fahaelàn'ny dingana famaritana ny tanin'ny teratany, ny fifandirana mifandraika amin'ny zo hanana fizaran-tany, ny fananiham-bohitra, ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ireo otrikarena voajanahary sy ny fahasimbana mihatra amin'ny vakoka.
Nandrakitra fifanolanana ara-tany miisa 18 ny Cimi tamin'ny taona 2015. Ary mbola hita indray fa voatonona betsaka indrindra i Mato Grosso do Sul, nahitana adin-tany miisa folo. Voarakitra tao ihany koa ny trangam-panafihana, fitrandrahana tsy ara-dalàna ireo otrikarena voajanahary ary fikasikasihana vakoka miisa 55. Ny ankamaroan'ireo fifandonana (18) dia nitranga tao Maranhão, ary mbola nahitana toy izany ihany (tsindrio eto raha hijery ny antsipirihany) tamin'ity taona 2016 ity. Voarakitra ho nitranga tao Maranhão ihany koa ny 11 amin'ny tranga miisa 52 tsy nanaovana fikarakarana ara-pahasalamana.
« Zavatra anankitelo no misongadina avy amin'ity tatitra ity : ny tsy fisian'ny fanampiana ireo vondrom-piarahamonina izay misy fiantraikany amin'ny famariparitana ny tanin'ny teratany ; ny fihenjanan'ny herisetra ; ny tsy fisian'ny fidirana an-tsehatra amin'ny fandravaravana ireo faritany teratany », hoy ny fanazavan'i Roberto Liebgott, mpandrindra ny faritra atsimon'i Cimi.